Ungasithola kanjani isisindo ngohlobo 1 nesifo sikashukela esingu-2 > Ukulawulwa kwesifo sikashukela
Kungani ezinye iziguli ezinesifo sikashukela zehlisa kakhulu isisindo, kanti ezinye, ngakolunye uhlangothi, zisheshe zithole isisindo futhi zithwele ukukhuluphala? Konke kukhulunywa ngama-pathogenesis ezinhlobo ezahlukahlukene zesifo.
Njengomthetho, abantu abanohlobo lokuqala lwesifo sikashukela, abangakhiqizi i-insulin, baqala “ukuncibilika” ngemuva kwezimpawu zokuqala zalesi sifo.
I-diabetes mellitus ezigulini ibonakaliswa yizimpawu eziningi ze-pathological, ikakhulukazi, ukukhula komile kakhulu, ukukhuphuka kwesifiso sokuchama, isimo esibuthakathaka, ukubukeka kwesikhumba esomile kanye ne-paresthesias, okungukuthi, ukugwaza noma ukushisa emilenzeni. Ngaphezu kwalokho, lesi sifo sithinta isisindo somuntu esiqala ngokuqinile futhi kubonakala kungenasizathu sokunciphisa isisindo.
Kwesinye isikhathi lokhu kwehla kwesisindo kungafinyelela kuma-20 kg ngenyanga ngaphandle kokuzivocavoca umzimba kanye nezinguquko ekudleni. Kungani abantu abanesifo sikashukela behla emzimbeni? Ukwehla kwesisindo okungazelelwe kuvame kakhulu ezigulini ezihlushwa uhlobo lwesifo sikashukela esincike kakhulu.
Ngoshukela ukhuluphele noma wehlise isisindo?
Ukwehla kwesisindo okuxakayo kuyinqubo eyingozi eholela ekuphazamiseni ukusebenza okujwayelekile komzimba, ukubekelwa phansi kwezinhlelo ze-enzymatic kanye ne-metabolism.
Ukwehla kwesisindo sikashukela kungenxa yezizathu ezilandelayo:
ukwephula ukuthathwa kokudla,
ukuwohloka okusebenzayo kwamaprotheni, amafutha nama-carbohydrate,
izindleko zamandla aphezulu.
Isici esibonakalayo sikashukela ukunciphisa umzimba kanye nokudla okuhle nokuningi. Izimo ezicindezelayo nezinkinga zengqondo zingenza isimo sibe sibi kakhulu.
Ukwehla kwesisindo kuwuphawu lwesifo sikashukela sohlobo 1, lapho umzimba ungakhiqi khona i-insulin. Lokhu kungumphumela wokusabela kwe-autoimmune lapho amaseli we-pancreatic abonwa njengakwamanye amazwe.
Izici eziholela ekukhuluphisweni kwesifo sikashukela zihambisana nesimo sofuzo, indlela yokuphila, kanye nobudala. Ngokwezibalo, amaphesenti ayisishiyagalombili namashumi ayisishiyagalolunye eziguli ezinesifo sikashukela sohlobo lwe-2 kutholakala ukuthi anokukhuluphala.
Isisindo somzimba siyabonakala kubantu abathatha i-insulin. Iphethini elandelayo iyabonakala: lapho uthatha kakhulu i-insulin, ushukela omningi umunwa amaseli omzimba. Kuyavela ukuthi i-glucose ayisuswa emzimbeni, kepha iguqulwa ibe izicubu ze-adipose, okuyimbangela yokuthola isisindo.
Isisindo somzimba siyadingeka ukuze wehlise isisindo ngokushesha. Uma isimo singanakwa, isiguli singase siqale ukukhiqiza i-dystrophy.
Ngakho-ke, inkinga yokuncipha kwesisindo sikashukela kumele ixazululwe ngokushesha. Kubalulekile kakhulu ukuyazi ngesikhathi.
Uma isisindo sesiguli sehla ngokushesha, kufanele ufune usizo kwingcweti efanelekile ngokushesha. Ukwehlisa i-glucose yakho kusiza ukushisa izicubu zomzimba. Lokhu kuvame ukuholela ekuqedeni kokuphelele kwamaphethelo aphansi, izicubu ezingaphansi.
Ukulawula lesi simo, kubalulekile ukukala amazinga kashukela kanye nesisindo. Ngaphandle kwalokho, ukukhathala komzimba kungenzeka. Esimweni esibi, amalungiselelo we-hormonal kanye nezinye izishukumisi ezinhlobonhlobo zibekelwe isiguli (ngoba ubungozi bokukhula ketoacidosis buphakeme impela).
Yimiphi imithi ezongisiza ukuthi ngibe ngcono?
Ukwehla kwesisindo esinamandla sikashukela kuwuphawu lokuthuthuka kwezindlela zalo ezibolile, ezihambisana nokushintshwa kwe-pathological ekusebenzeni kwezitho zangaphakathi, okuholela ekukhathaleni okujwayelekile kanye nokuwohloka okukhulu enhlalakahleni yomuntu ogulayo.
Izinguquko ezinjalo emzimbeni wesiguli zibonisa ukuthi akasakwazi ukulawula izinqubo ze-metabolic ngaphandle kosizo lwangaphandle, ngakho-ke, udinga ukulungiswa okwengeziwe.
Ukwenza kube ngokwejwayelekile isisindo, amaphilisi okudla ayatholakala. Izidakamizwa ezinjalo zinezinzuzo eziningana, kepha futhi zinokuphikisana kanye nemiphumela emibi. Kungakho, ngaphambi kokuqala ukwelashwa, bonana nodokotela futhi uqaphele kahle imithamo ebekiwe.
Umuthi owaziwa kakhulu yiSiofor. Amaphilisi we-glucophage abambezelwe-ukukhululwa anomphumela omkhulu esigulini, kepha ngasikhathi sinye izindleko eziphakeme.
Izidakamizwa ezinjalo zandisa ukuzwela kwamangqamuzana omzimba kwi-insulin, okuholela ekunciphiseni kwesilinganiso sawo egazini. Vimbela ukunqwabelana okusebenzayo kwamafutha futhi kusiza inqubo yokunciphisa isisindo.
Into esebenzayo yamathebulethi yi-metformin. Umuthi uphuzwa nokudla. ISiofor yehlisa ushukela. Imvamisa, odokotela banikeza ikhambi lalabo abanesifo sikashukela okulesi sifo esisikhiqize ngokumelene nesizinda sokukhuluphala.
USiofor wenza imisebenzi emibili ebalulekile:
Ibuyisela ukuzwela kwe-insulin.
Njengoba kungabonakala kuzibuyekezo, ngemuva kokuqala kokusetshenziswa kwamatafula, ukufisa ngamaswidi kuyehla. Ngaphezu kwalokho. I-Siofor yisivikelo esihle ekuhlaselweni yi-hypoglycemia, engaba yingozi esigulini.
Ngisho nalezo ziguli ezingalandeli ukudla, kanye neSiofor zehlisa isisindo, noma zingashesha kangako, kepha imiphumela izoba njalo. Ungakhohlwa ukuthi amaphilisi aklanyelwe ngokukhethekile abanesifo sikashukela. Uma beqala ukuthatha abantu abanempilo, lokhu kuzoholela ekuphazamisweni kwe-metabolic.
Esimweni lapho ukudla okwenziwa ngokomzimba okulinganiselayo kungasizi ukuthola isisindo, kunikezwa amalungiselelo akhethekile ezigulini. I-Diabeteson MB ingekaleli qembu.
Izinkomba zokusetshenziswa kwaso - ukuntuleka kokusebenza kahle kokulashwa kokudla, imithwalo yohlobo lomzimba, ukwehla kancane kancane kwesisindo somzimba. I-Diabeteson MB imiselwe kuphela iziguli ezindala.
Umthamo onconyiwe usetshenziselwa ibhulakufesi. Umthamo wokuqala ngu-30 mg, unqunywa ngudokotela ngokuya ngokuhlushwa kwe-glucose egazini lesiguli.
Ungasithola kanjani isisindo ngohlobo 1 nesifo sikashukela esingu-2?
Uma ufuna ukubuyisa isisindo kokujwayelekile, okokuqala-ke, shintsha indlela odla ngayo:
yidla kaningi, kepha ngezingxenye ezincane. Hlukana nokudla okujwayelekile kube okuncane,
Ukudla okudliwayo kufanele kube nenani eliphakeme lokudla okunempilo. Yidla imifino eminingi, izithelo, imikhiqizo yobisi, okusanhlamvu, amantongomane, inyama ebilisiwe,
Ungaphuzi uketshezi ngokushesha ngaphambi kokudla. Gcina okungenani isigamu sehora,
njengesidleke, yidla lokhu kudla: ukwatapheya, izithelo ezomisiwe, ushizi, amantongomane,
khuphula inani lama-carbohydrate adliwayo. Lapha sikhuluma ngama-carbohydrate ayinkimbinkimbi, futhi hhayi kalula ukugaya ukudla. Ama-carbohydrate "amahle" anika umzimba amandla, futhi ngeke kube nokuxhuma ushukela: imikhiqizo ephelele yokusanhlamvu, i-legumes, iyogathi, ubisi,
amafutha azosiza futhi ukuthola isisindo. Kunamafutha enziwe nge-polyunsaturated ne-monounsaturated, kepha awekho lapho ethengiswa ngamafutha. Yidla amantongomane, imbewu, ukwatapheya. Sebenzisa uwoyela womnqumo nowokudlwengulwa ekuphekeni.
Konke kuncike esimweni somuntu, ngakho-ke kubalulekile ukuzibekela umgomo uye kuyo:
Okokuqala, thola ukuthi isisindo kufanele sibe yini esimweni sakho. Ngenxa yokuthi abantu abaningi banombono ongacacile wesisindo esinempilo, bathambekela emigomweni engalungile. Qiniseka ukubala inkomba yakho yobukhulu bomzimba,
lawula ukubamba kwakho ikhalori. Uma ufuna ukuthola isisindo, khona-ke ukudla kufanele kube nekhalori ephezulu,
ukuzivocavoca okuhlelekile Ukuzivocavoca kusiza ukwakha izicubu zomzimba, ezizonikela ekuzuzeni isisindo. Futhi, ngemuva kokuqeqeshwa, isifiso sokudla siyathuthuka.
Ungakhohlwa ukuthi uma wenza ushintsho ekudleni kwakho, bese ulawula izinga ushukela wakho. Akwaziwa ukuthi lokhu noma lolu shintsho lungasithinta kanjani isimo sempilo yakho. Bonana nodokotela wakho ngalokho okufanele ukwenze ukuze ukhulule isisindo.
Kubaluleke kakhulu ukuthi umzimba uthole inani elidingekayo lama-kilojoule. Akunconywa ukweqa isidlo esisodwa.
Ngemuva kwakho konke lokhu, kungaholela ekulahlekelweni kwama-kilojoule angama-500 ngosuku. Awukwazi ukweqa ibhulakufesi, kanye nesidlo sasemini, isidlo sasebusuku.
Kulokhu, udinga ukuhlela nsuku zonke. Esikhathini sikashukela, udinga ukudla njalo - cishe izikhathi ezi-6 ngosuku.
Yikuphi ukudla okufanele kudliwe ngabantu abaneshukela abanoshukela?
Kunezeluleko ezithile ezikusiza ukuba uthole isisindo kuhlobo 1 nesifo sikashukela esingu-2. Imenyu kufanele ifake ukudla okunenkomba ye-glycemic ephansi, khona-ke izinga leshukela ngeke likhuphuke kakhulu.
Kuyelulekwa ngokuxhumanisa ukudla nodokotela. Uchwepheshe uzokusiza ukudala ukudla ngaphandle kokulimaza kakhulu empilweni.
Uma kwenzeka ukhathala, kungakuhle ukuthi udle uju, ubisi lwembuzi olusha. Le mikhiqizo inezinto zokwelapha, ithambisa umzimba ngokuphelele. Lapho uthola isisindo somzimba ngosuku, inani lamafutha akufanele libe ngaphezulu kwama-25%. Ngaphezu kwalokho, umthamo wazo kufanele usatshalaliswe kukho konke ukudla okukhona.
Ama-diabetesics akhulisa isisindo somzimba angadla izitsha eziseceleni (ukolweni, i-oat, i-buckwheat, kanye nelayisi, ibhali le-pearl). Ngokuqondene nemifino emisha, leli qembu lifaka utamatisi, ukhukhamba omusha, ubhontshisi oluhlaza, nekholifulawa entsha.
Ukuze uthole inzuzo eqinile futhi ezinzile yesisindo, kunconywa ama-carbohydrate. Lokhu kuholela emiphumeleni oyifunayo. Ukutholwa kwesisindo ngokweqile ngenxa yalokhu ngeke kwenzeke.
Ukudla ama-carbohydrate kumele kwenziwe ngokuya ngemithetho enjalo:
ukusetshenziswa kufanele kufane kuwo wonke amahora angama-24. Kungcono ukudla inani elikhulu lesidlo sasekuseni, ukudla kwasemini kanye nesidlo sasebusuku ukuze unciphise ukutholwa kwalesi sakhi,
ukudla okusemqoka kufanele kube ngama-30% wokudla nsuku zonke amakhalori (ukudla ngakunye),
ukunakwa okukhethekile kufanele kukhokhwe ekudleni okuhambisana. Isidlo sasekuseni sesibili, isidlo sakusihlwa kufanele kube yi-10-15% yesilinganiso ngosuku (ekudleni ngakunye).
Njengoba wazi, ukuthola isisindo ngosizo lokudla okunama-calorie aphezulu akunzima. Kodwa-ke, le ndlela yokuthola isisindo ayilungele abanesifo sikashukela.
Ngemuva kwakho konke, ukusetshenziswa kwamafutha, izinhlobonhlobo zokulondolozwa kukhathaza umzimba, futhi kunciphisa futhi ukwenziwa kwe-insulin. Kokudla kwansuku zonke, amafutha kufanele abe ngama-25%, ama-carbohydrate - aze afike ku-60%, amaprotheni - 15%. Ezigulini esezikhulile, izinga lamafutha lehliselwa kuma-45%.
Ukwenqaba uketshezi ngaphambi kokudla
Kukholakala ukuthi ngaphambi kokudla uketshezi akunakudliwa. Ngempela kunjalo. Ikakhulu, lokhu kuvinjelwa kusebenza kwabanesifo sikashukela.
Leli qembu leziguli alikwazi ukwandisa isimo sepheshana esiswini, ngoba ukuphuza okubandayo ngaphambi kokudla kungathinti izinga lokugaya.
Izimbangela Zokwehla Kwesisindo Esingazelelwe Esimweni Sikashukela
Uhlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2 luvame ukutholakala kubantu asebekhulile, futhi esinye sezimbangela saso ukusetshenziswa ngokweqile kwama-carbohydrate, kufaka phakathi ushukela, okuhambisana nalokhu kuholele ekutheni kuthiwe isisindo esande ngokweqile. Ezimweni ezinjalo, esinye sezisekelo zokwelapha i-antidiabetic isidingo sokunciphisa isisindo sikashukela, esisiza ukukala umthwalo emzimbeni (inhliziyo, imithambo yegazi, amathambo kanye nokuhlangana). Kepha ucwaningo lwesikhathi eside lwalesi sifo lwembula iphesenti elithile lezimo ngesimo esibuyela emuva, lapho isiguli esinesifo sikashukela siqala ukwehla ngokweqile.
Imvamisa lokhu kubonakaliswa kwemitholampilo kuthinta abanesifo sikashukela besikhathi esiphakathi noma abancane, okuholela ekuziphatheni okusebenzayo, okungahlangene nokukhuluphala nokungasebenzi. Isizathu sokulahleka kwamakhilogremu sikashukela akuyona inkinga yokukhiqizwa kwe-insulin kumanyikwe, kodwa amandla akhubazekile amaseli wezicubu ukuwuthatha ngenkathi kuqinisekiswa ukuthuthwa kweglucose kusuka egazini. Inkinga efanayo ithinta cishe i-20% yazo zonke iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2, futhi umuthi wesimanjemanje ukhombisa izici eziyingozi ezinkulu zokungamelana ne-insulin ekungapheleni kwe-pancreatic:
iminyaka engaba ngu-40 nangaphezulu
Ukuvela kokumelana ne-insulin kungenzeka ngezimo ezimbili: inactivation esheshayo (ukubhujiswa) yokushiswa kwe-insulin noma ukubhujiswa okuthile kwama-receptors abona i-insulin kulwelwesi lwamaseli ahambisanayo kwezicubu. Inqubo yokuqala isuselwa ekuphuzeni okusheshayo kwe-insulin ekhiqizwa esibindini, lapho ichithwa khona. Ukuphambuka kwesibili kwenzeka lapho ama-antibodies ebona ama-insulin receptors elulwelweni njengama-antigen, futhi ngenxa yalokho athambekele ekuwabhubhiseni (lokhu kuyindlela ye-autoimmune pathology).
Ngandlela thile, ukwehla kancane kancane kwesisindo somzimba kungenxa yokuthi izicubu zomzimba azitholi ushukela owanele othuthelwa lapho nge-insulin. Ngenxa yalokhu, umzimba awutholi okuwukuphela komthombo wamandla (okukhishwa njengamanje ngomchamo), ngenxa yawo uqala ukusebenzisa ukugcwala kwangaphakathi kokuqongelelwa kwamafutha ukugcina umsebenzi odingekayo. Lokhu, ngokulandelana, kuholela ekunciphiseni kwesendlalelo samafutha kumanani aphansi, okuboniswa ngaphandle njengokulahlekelwa kwesisindo.
Isisindo esifanele - kungani ukulawula kubalulekile?
Abantu abanesifo sikashukela sohlobo loku-1 kufanele bakwenze lokhu ukuvikela ukuphuma komzimba nokukhula kwe-dystrophy. Izinkinga ziphakama ngoba i-glucose engena egazini ayingeni emangqamuzaneni, kepha ikhishwa emchameni, kuyilapho umzimba ushiywe ngaphandle komthombo wamandla. Ukuze akwenzele lokho, uqala ukuphula i-glycogen yesibindi nemisipha kanye namafutha agcinwe, kuyilapho umuntu elahlekelwa isisindo ngokushesha.
Kulabo abanesifo sikashukela sohlobo 2 futhi ukhuluphele ngokweqile, ukubuyela kwaso esivamile kusiza ukuqeda lesi sifo (ukukhuluphala kungenye yezinto lapho izicubu ziba insulin futhi isifo sikashukela sikhula), futhi kuvimbele ukuthuthukiswa kwe-atherossteosis, okubangela ukuqunjelwa kwe-myocardial noma isifo sohlangothi.
Lokhu kungaba yingozi kanjani?
Ubungozi bokwehla kwesisindo okuhleliwe kulele ekutheni kungenzeka ukuthi ayithathwa njengophawu oluyingozi, noma okubi kakhulu - ibonwa kahle esimweni semibono yanamuhla ngobuhle bomuntu. Ngenxa yalokhu, amandla amabi enqubo aholela esimweni lapho isiguli sibhekene nemiphumela yokuncipha kwesisindo - ukubonakaliswa okuningana kokwemvelo kwesimo esingesihle.
Umshini wokuqhekeka kwe-lipid eqoqiwe lapho kungekho khona inani elanele lokudla kwe-carbohydrate ubizwa ngokuthi yi-ketosis, futhi imvamisa i-ketosis (ukudonsa kwemizimba ye-ketone egazini ngenxa yokuwohloka kwamafutha) kuthathwa njengokujwayelekile. Izinkinga ziqala lapho ukuntuleka kwe-glucose ezicutshini kudlula umkhawulo ovumelekile, yingakho izitho eziningana zomzimba, ikakhulukazi ubuchopho, ziqala ukuzwa indlala ye-carbohydrate. Iqiniso ngukuthi imizimba ye-ketone ayikwazi ukubanikeza amandla, ngakho-ke i-gluconeogenesis (ayisebenzi ngaso sonke isikhathi) noma ukwanda kokuxineka kwemizimba ye-ketone esegazini iba impendulo yomzimba ukuze ishintshe zonke ezinye izitho nezinhlelo komunye umthombo wamandla.
Ukuthuthukiswa kwale nqubo kungaholela kwinto efana ne-ketoacidosis, etholwa yizimpawu ezithile ezithile:
i-hyperglycemia kuze kufike ku-15 mmol / l nangaphezulu,
glucosuria kuze kufike ku-50 g / l nangaphezulu
Uma umuntu onesifo sikashukela engasizwa kulesi sigaba, uzoba nesimo esihle: ubuthakathaka, i-polyuria, ukozela, ukulahlekelwa isifiso sokudla, isicanucanu kanye nephunga le-acetone ephuma emlonyeni. Esimweni esinjalo, isiguli sidinga ukulaliswa esibhedlela ngokushesha, ngoba ukuphefumula kwe-ketoacidotic kungenye yezimbangela ezivame kakhulu zokufa kwesifo sikashukela i-mellitus.
Unganciphisa kanjani isisindo sikashukela?
Susa ukudla okwandisa ushukela ekudleni kwakho. Lokhu kufaka ezinye izinhlobo zokusanhlamvu: amabele, ilayisi, ibhali leparele, kanye nesinkwa, amazambane, amaswidi, ushukela, izaqathe, izimbila,
Yidla amaqanda amaningi, ukudla kwasolwandle, imifino, inyama, amakhambi, izindle,
Dlala ezemidlalo ngenkuthalo. Ukugijima, ukuhamba, ukubhukuda, imithwalo yamandla enama-dumbbells nomgqomo kufanelekile. Izinhlobo ezifanayo zemithwalo zilungele abantu abanohlobo lwe-1 nolwe-2 lwesifo sikashukela,
Yidla izikhathi ezi-5 noma ezi-6 ngosuku, yenza ukudla okungama-200-300 ml,
Phuza amanzi angaphezulu kwamalitha amabili. Ngokuvamile, udinga ukuphuza amanzi ekubukeni komile okuncane.
Futhi, izithako ezinosawoti, ezibhemayo, ezinosawoti, imajarini nebhotela, imifino ethosiwe, i-pasta, umvimba, imayonesi, imikhiqizo yobisi enamafutha, utshwala kufanele bususwe ekudleni.
Potency nesifo sikashukela. Ukuthi lesi sifo sithinta kanjani umzimba wesilisa ofundwe lapha.
Ingabe ushukela kufanele ungene esikhundleni se-fructose? Zuza futhi ulimaze.
Ungasithola kanjani isisindo sikashukela?
Ukucebisa abanesifo sikashukela ukuthi bangalulama kanjani, ngaso sonke isikhathi kufanele unake imininingwane yesifo sabo kanye nezinkinga ezihlobene, ngaphandle kwalokho inqubo ingalimaza kuphela. Okokuqala, noma yikuphi ukwelashwa kokudla kwesisindo somzimba kufanele kuqale ngokususa noma ukunxeshezelwa kwezimbangela eziholele esimweni se-pathological, ngaphandle kwalokho yonke imizamo izoba yize. Siyakhuluma, mayelana nokwelashwa, lapho umuntu engakha khona isiguli ukudla okhethekile.
Inhlanganisela yokwelashwa okufanele kanye nokudla okufanele kufanele kunezelwe isethi yemisebenzi yokuhlangana nomzimba wezempilo yesifo sikashukela (ungaqala nje ukudla okuningi ngenkathi ulonda impilo yokuhlala).
Ukuqina kwesisindo kufanele kuvumelane futhi kuhambisane kancane, ngoba ukuguquguquka kwesisindo komzimba ngokuzumayo kuzoba yingozi emzimbeni. Ukudla kumele kudwetshwe udokotela ozobheka isimo sakhe sesiguli, ubunzima besifo sikashukela kanye nokuba khona kwezinkinga ezikhona. Ngendlela efanele, isisindo sizobuyela kwesejwayelekile ngemuva kwenyanga eyodwa nohhafu, kepha ngaleso sikhathi kuzodingeka ukuthi sinakekele ukwehla kancane kancane kwamandla ashukumisayo wokugcina lelo zinga lifinyelelwe ukuze isifo sikashukela singaphenduki esibi.
Imiphi imikhiqizo engcono ukukhetha?
Ngokunikezwa iqiniso lokuthi inkinga ye-hyperglycemia kushukela ayinyamalali, ukuzama ukuthola isisindo ngamaswidi, namakhekhe noma ngama-muffin kuyindlela engalungile. Ngendlela efanayo, kuzoba kungalunganga ukudlulisa isiguli ekudleni okunamafutha ngokuphelele, ngoba lokhu kungandisa izinkinga ezikhona ngepheshana lesisu kanye nohlelo lwenhliziyo. Indlela enengqondo kungaba ukuqala ngokudla okulondolozwa ngokuphelele: okusanhlamvu okuphakathi kwe-carb, imikhiqizo yobisi yokuqukethwe okunamafutha alingene, inhlanzi engenamafutha nenkukhu econsayo.
Njengoba usethe ukuhla okuyilo ngale ndlela futhi ulungiselela umzimba, ungangezela lokhu kudla nge-veal newundlu, amaqanda enkukhu, amantongomane, amakhowe nemikhiqizo kakolweni ye-durum. Qiniseka ukuthi ukudla kufanele kube nenani elanele lemifino nezithelo, ngoba umzimba obuthakathaka udinga ukubuyisa izinsalela zawo amavithamini namaminerali, uqinise ukungatheleleki endleleni.
Lapho usuthole ukuthi ungasinda kanjani ngesifo sikashukela sohlobo 2, ungabheka izibonelo ezithile zokuthi ibhulakufesi lesidlo sikashukela, isidlo sasemini nesidlo sakusihlwa kungaqalwa kanjani.
Ngaphambi kokuthola isisindo kuhlobo 2 lwesifo sikashukela, kufanele uthintane nochwepheshe onesipiliyoni ozokwakha uhlelo olunzima lokwakha isisindo somzimba futhi azibekele umgomo wokugcina osuselwa eminyakeni yobudala besiguli, ukuphakama nobulili.
Okulandelayo, ungaqhubeka nokuhlanganiswa kwemenyu, okungabukeka kanjena:
ibhulakufesi: iqanda elibilisiwe, i-granola, itiye ngaphandle koshukela,
isidlo sasemini: ingilazi yeyogathi yokuphuza noma izithelo ezimbalwa ezimnandi nezomuncu,
isidlo sasemini: iphalishi yerayisi, isifuba senkukhu noma umlenze, isaladi yemifino entsha, i-compote,
isidlo sasemini: ingilazi ye-kefir noma i-ryazhenka, amakhukhi we-oatmeal,
isidlo sakusihlwa: isiphuzo semifino nge-veal enamafutha amancane, ucezu lwesinkwa rye, ingilazi yamanzi,
isidlo sesibili: amajikijolo noma izithelo, iyogathi.
Phakathi kokusanhlamvu, ngaphandle kwelayisi, i-buckwheat ne-pearl ibhali nakho kuzosebenza futhi kube lusizo ekuzuzeni isisindo. Ukudla okwenziwa masonto onke okugunyaziwe kufanele kufake izinhlanzi ezibilisiwe ezimbili noma ezintshontshiwe zezinhlobo ezinamafutha amancane, imifino ebhakiwe nenamakhosi, ushizi wasekhishini no-ukhilimu omuncu ongenawo usawoti, imidumba ne-pasta kusuka kukakolweni we-durum njengesitsha esisehlangothini. Ungakhohlwa ukuthi kwasemini isiguli kufanele sinikezwe izifundo zokuqala, isibonelo, isobho somhluzi wenkukhu, ogcwala kahle futhi unikeze isilinganiso esifanele samakhalori. Njengama-dessert, ungaphendukela kulungiselelo lwama-jellies ahlukahlukene wezithelo, ama-soufflés kanye nama-mousses ngaphandle kokusebenzisa ushukela, kuncike ubumnandi bezithelo namajikijolo ngokwawo (noma ama-sweeteners).
Ungaphungula kanjani ishukela?
Okokuqala, kungcono ukuguqukela ku-endocrinologist noma wezokwelapha. Ukudla kufanele kuhlelwe ngokucacile nangokufanele. Ukudla kufanele kuthathwe cishe ngasikhathi sinye.
Uma ufuna ukwenza ngokwejwayelekile isisindo, bese usebenzisa ukudla okunenkomba ephansi ye-glycemic:
ungafaki ekudleni kwakho okuthosiwe, okunamafutha, okubabayo, okubhemayo, kotshwala,
sebenzisa izinambuzane esikhundleni sikashukela,
yehlisa ukudla kwakho amafutha kanye nama-carbohydrate,
yidla okuthosiwe, okuphekiwe noma okubhakiwe.
Umuntu onesifo sikashukela usithola kanjani isisindo?
Imvamisa, abantu abanesifo sikashukela sohlobo lokuqala bahlupheka ngokwehla kwesisindo, lapho i-insulin emzimbeni iyekayo ukukhiqizwa. Lesi sifo sithathwa njengengelapheki ngakho-ke izindlela okuhloswe ngazo ukulawula isisindo somzimba wakho ziyadingeka ukuze kulondolozwe amazinga evamile eglucose, okuthi ngemuva kokudla kungabi ngaphezu kwenani lika-6.0 millimole / litre.
Bala izidingo zamakhalori ezinikezwe amandla amaningi omzimba,
Jwayela ukudla, udle amahlandla ama-4-6 ngosuku ngezingxenye ezincane,
Gcina umkhondo wenani lamafutha / amaprotheni / ama-carbohydrate angena emzimbeni. Isilinganiso sabo esifanele yi-25% / 15% / 60%.
Yidla ukudla okune-organic,
Nciphisa ukudla okumnandi nokunesitashi.
I-Porridge: i-buckwheat, ibhali le-pearl,
Ikofi netiye ngaphandle koshukela,
Apula, amapharele, ulamula, amawolintshi, amaplamu,
Izaqathi, i-zucchini, u-anyanisi, i-beet,
Amakhompiyutha, amanzi amaminerali,
Amabhomu, ama-muffin, ophaya nezinye izinto zokupheka, ngaphandle kwama-yeast,
Ushokoledi, amaswidi, ushukela, amakhekhe,
Ipasta, ukudla okulula.
Ukuphuza utshwala nokubhema ugwayi kuyinto engathandeki kakhulu.
Ukulawulwa kwesisindo somzimba kungenye yemisebenzi esemqoka yabo bonke abanesifo sikashukela. Ikuvumela ukuthi ugcine amazinga eglucose ejwayelekile, ukuvimbela ukukhula kwezifo eziyingozi, futhi kwesinye isikhathi kuholela nasekululameni ngokuphelele. Ngokusho kochwepheshe, kwesinye isikhathi abantu abanesifo sikashukela sohlobo 2 badinga ukuncipha kuphela bese isifo sincipha.
Ngabe ngidinga ukuthola isisindo ngesisindo esiphansi?
Abantu abaningi abanesifo sikashukela, abafunda ngemiphumela yokulahlekelwa isisindo ngokuzumayo, bazama ngokushesha ukubuyela kwesisindo sabo sangaphambilini futhi banamafutha impela.
Kodwa ingabe lezo zenzo kufanelekile ngombono wezokwelapha?
Ngokwemvelo, iziguli ezinesifo sikashukela kufanele zilawule isisindo sazo. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukusweleka kwayo kuholela ku-cachexia, izifo zezinso nezinso, ukuncipha kokubuka kanye nokukhula ngokushesha kwesifo sikashukela se-polyneuropathy.
Ngakolunye uhlangothi, akufanele uthole amakhilogremu ngokushesha kakhulu, okucebisa ukudla kwakho ngama-carbohydrate. Izenzo ezinjalo zizonyusa kuphela izinga likashukela egazini futhi zenze kube ngcono nesifo sikashukela, zibe nomthelela ekwandeni okusheshayo kwezinkinga zalo.
Ukudla kwansuku zonke kufanele kuhlukaniswe ama-servings angama-5-6, futhi kufanele kube amancane. Ngaphezu kwalokho, ngokukhathala okukhulu kweziguli, kunconywa ukuthatha uju oluncane ukubuyisela ukungatheleleki komzimba.
Isifo sikashukela kufanele senze imenyu ukuze isilinganiso samafutha esilinganisweni sokudla sifike ku-25%, ikhabhoni - 60%, namaprotheni - cishe yi-15%. Abesifazane abakhulelwe bayelulekwa ukuthi bandise inani lamaprotheni ekudleni kwabo bafinyelele kuma-20%.
Umthwalo we-carbohydrate usatshalaliswa ngokulinganayo usuku lonke. Ingxenye yama-kilojoule adliwe ngesikhathi sokudla main kufanele isuka ku-25 iye ku-30%, futhi ngesikhathi sokudla - kusuka ku-10 kuye ku-15%.
Kungenzeka yini ukuthi uphulukise ukukhubazeka okunjalo ngokudla kuphela? Kungenzeka, kepha ukondleka kumele kuhlanganiswe nokwelashwa kokuzivocavoca kwesifo sikashukela, lokhu kuzoba nomphumela osheshayo futhi osebenza kangcono. Vele, lapho isiguli sizama ukuthola isisindo somzimba, akufanelekile ukuzikhipha amandla ngokuzivocavoca ngokweqile.
Kepha ukuhamba kuze kube yimizuzu engama-30 ngosuku kuzohlomula kuphela. Ukuhamba njalo komzimba kuzosiza ukuqinisa izicubu, ukuthuthukisa amasistimu wokuphefumula nawenhliziyo.
Isifo sikashukela, ukudla okufanele, okususelwa ekusetshenzisweni ngokulinganayo kokudla kwe-carbohydrate, kuzosiza ukubuyisela isisindo.
Kulokhu, isiguli kufanele silawule ukudla kwayo futhi sinake inkomba ye-glycemic yemikhiqizo yokudla, inikeze okuthandwa kuphela yilapho ephansi.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi uma wehlisa i-GI, ushukela omncane lokhu kudla uzokunika egazini. Ngaphezu kwalokho, iziguli ezinesifo sikashukela zidinga ukuqhubeka nokudla okunama-kilojoule amaningi futhi zidle ukudla okukhuthaza ukukhiqizwa kwe-insulin, kufaka phakathi ugarlic, uwoyela ongcolile, amahlumela eBrussels, uju nobisi lwembuzi.
Ukuze ululame, kufanele udle kaningi nangezingxenyana ezincane (kufika izikhathi ezi-6 ngosuku). Ama-carbohydrate adinga ukugqokwa ngamanani amancane futhi ngokulinganayo usuku lonke.
Imenyu yabanesifo sikashukela ihlukile. Kepha ukudla okunjalo kuyadingeka ukuba balondoloze isisindo nesimo, bathuthukise isimo sabo esivamile, futhi bavikele nokuthuthuka kwezinkinga zesifo.
Ukuqonda izizathu zobunzima bokunciphisa umzimba ezigulini ezinesifo sikashukela, kuyadingeka ukuqonda ubudlelwane phakathi koshukela wegazi, i-insulin nesifo sikashukela uqobo.
Amazinga kashukela egazini ancike ekudleni okuqukethe i-carbohydrate. Amazinga kashukela wegazi akhuphuka ngokulingana nezinga lokugayeka kokudla okudliwayo: lapho ama-carbohydrate amaningi ukudla equkethe, ngokushesha okuwohloka emgodini wesisu, ushukela ungena ngokushesha egazini.
Ukuphendula ukwanda koshukela wegazi, umzimba usayina ama-pancreas ukukhulisa inani elithile le-insulin bese ulidedela egazini. Lapho i-insulin ingena egazini, ibopha ushukela bese iwunikeza emangqamuzaneni omzimba kuye ngezidingo: ngesikhathi sokuzivocavoca ngokomzimba, ushukela uhanjiswa kumaseli emisipha nasebuchosheni, ubanikeze amandla, uma umzimba ungawadingi amandla awengeziwe, ushukela uhanjiswa kumaseli omzimba (idepho yamafutha), lapho ihlehliselwa khona.
Ngakho-ke, uma umzimba udinga amandla, ushukela uzophulwa ngamaseli bese uchithe umsebenzi, ngaphandle kwalokho ushukela uzoholela ekwandeni kwesisindo somzimba.
Inkinga yokuncipha kwesisindo kwabanesifo sikashukela kungenxa yokuthi amazinga kashukela wegazi akhuphuka cishe njalo, ngoba umzimba awukwazi ukulawula isilinganiso sikashukela ngenxa yokuntuleka kwe-insulin. Ngakho-ke, ukugeleza ushukela kusuka egazini kuyiwe kudepho yamafutha omzimba empeleni akuyeki, okufaka isandla ekukhupheni njalo kwesisindo somzimba.
Isifo sikashukela sithinta isisindo sesiguli. Ngakho-ke, ngefomu elincike ku-insulin, ezimweni eziningi, ukwehla kwesisindo kwenzeka, futhi ngefomu elizimele le-insulin, ukunqwabelana kwamafutha.
Uma ufuna ukuba ngcono, yidla ukudla okunama-khalori amaningi aphezulu emafutheni anempilo nama-carbohydrate. Uma umgomo wakho ukunciphisa umzimba, bese ulawula ngokucacile inani lamakhalori asetshenzisiwe, kanye namafutha kanye nama-carbohydrate.
Kunoma ikuphi, ungakhohlwa ngemikhiqizo enqatshelwe, kufaka phakathi amafutha, isipayisi, othosiwe, obhemiwe.
Ukondliwa okufanelekile kuyisihluthulelo sempilo sabangekho sikashukela kuphela, kodwa nesawo wonke umuntu. Cabanga ngomzimba wakho namuhla, udla ukudla okunempilo, futhi uzokubonga kusasa, unikeze impilo namandla!